Mafuta epombi bhodhoro
Ndeapi akakosha mapoelo ekuteerera kana PP jekiseni kuumbwa?
ne admin pane 2021-10-04
Nhanganyaya: Seimwe yeanoshandiswa zvakanyanya mapurasitiki, PP inogona kuonekwa kwese kwese muhupenyu hwezuva nezuva. Iyo ine yakanyanya kuchena kupfuura yakajairwa pc. Kunyangwe iyo isina yakakwira coloring yeABS, PP ine ...
Kavha zivo 丨 7 kufunga kwejekiseni kuumbwa, unoziva zvakadii?
ne admin pane 2021-09-27
Nhanganyaya: Jekiseni kuumbwa ndiyo yekutanga maitiro ekuzora zvipenga zvigadzirwa. Yokutanga muitiro kazhinji jekiseni Kuumbwa, izvo zvakananga anosarudza chigadzirwa unhu uye negoho. Iyo ...
Ndeapi matanho ekugadzira ekushongedza ekuputira zvinhu?
ne admin pane 2021-09-22
Zvizoro zvekutakura zvinhu zvinofanirwa kuratidza hunyanzvi uye yakajeka nzvimbo dzezvigadzirwa uye nekuvandudza kwavo kukwikwidza pamusika. Nekuti kana vatengi vachisarudza zvigadzirwa, ivo vanowanzo kukweverwa ne ...
Kuzivikanwa kwemabhodhoro ePET uye zvigadzirwa zvekushandisa
ne admin pane 2021-09-08
PET bhodhoro rinoreva bhodhoro rine chinhu chepurasitiki chinonzi polyethylene terephthalate (polyethylene terephthalate), kana PET kwenguva pfupi, inova mubatanidzwa we terephthalic acid uye ethylene ...
Basa re cosmetic chubhu mune yekushongedza kurongedza
ne admin pane 2021-08-27
Zvizorwa epurasitiki chubhu Sezvo makwikwi mumusika wezvizoro unowedzera uye unotyisa, mutengesi wega wega wezvipfeko akaedza zvakanyanya kuwedzera chikamu chekutengesa chezvigadzirwa zvavo uye kuisa l ...
Kuenzanisa kwegirazi bhodhoro frosting maitiro uye sandblasting maitiro
ne admin pane 2021-08-25
Sandblasting ibasa rinoshandisa mweya wakamanikidzwa sesimba rekusundidzira mabrasives kumusoro kweiyo workpiece yekugadzirisa. Iyi ndiyo inonzi sandblasting, inova iyo yatinowanzoidza kuti shot bla ...
Maitiro ekusarudza cosmetic lotion pombi vagadziri
ne admin pane 2021-08-20
Zvizorwa zvizorwa pombi rudzi rwekushongedza kavha zvinhu zvinoburitswa nekumanikidza pombi tekinoroji. Zvizorwa mafuta pombi zvave kushandiswa zvakanyanya muchigadzirwa kurongedza senge mafuta ekuzora, shampoo, shawa ...
Sei sarudza epurasitiki pfapfaidzo bhodhoro?
ne admin pane 2021-08-18
Mumusika wekupakata zvinhu, kunyange hazvo zvipodaidzo zvekushongedza mabhodhoro zvakapatsanurwa, mabhodhoro epurasitiki ndiye sarudzo yekutanga yevatengi kusarudza mabhodhoro ekupfapfaidza. Sei uchiita tsika ...
Iko kune kwakawanda kudiwa kweshoko kutsvaga maviri ekuzora: imwe irori pane bhodhoro uye imwe ibhodhoro rinotenderera. Asi ivo rudzi rwechigadzirwa. Kutenderera pamabhodhoro mabhodhoro anotenderera, asi everyo ...
Zvakadii nezveShanghai Rainbow Industrial Co, Ltd.
ne admin pane 2021-08-04
Shanghai Rainbow Industrial Co, ltd yakavambwa muna2008, hofisi iri muShanghai, fekitori muYuyao, Zhejiang Province, ine nyore kutakura kuenda kuShanghai uye Ningbo gungwa port.We̵ ...
Matipi ekushandisa uye kugadzirisa kwemabhodhoro emafuta akakosha
Kunze kwekuzora mafuta akakosha pamaoko ako kana kubata muchina wemvura-okisijeni, Iwo akakosha emabhodhoro emafuta anogadzira eShanghai Rainbow Industrial Co, ltd inoratidza kuti iwe unogona zvakare p ...
ne admin pane 2021-07-28
Iko mashandiro uye zvakanakira Pe epurasitiki chubhu kurongedza Iko mashandiro uye zvakanakira pe epurasitiki chubhu kurongedza: yakatetepa yepamusoro kuumbwa, yakatetepa yepamusoro tsamba, fudzi embossing, yakawanda yemukati ...
USA Hofisi: Fany Guo
Kero: 18551 gale ave ， Guta reIndasitiri, CA 91748